Duqeymo iyo qaraxyo ka dhacay magaalooyin katirsan dalka Suuriya.
Tuesday December 28, 2021 - 17:02:31
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in qarax xooggan laga maqlay magaalada caasimadda ah ee Dimishiq saacado kadib markii diyaarado dagaal ay duqeeyeen Laadiqiyah.
Wakaaladda wararka SANA ee afka nidaamka Bishaar Al-asad ku hadasha ayaa sheegtay in ugu yaraan laba qarax ay ka dhaceen mandiqadda Dowmah ee magaalada Dimishiq, sida ay wararku sheegayaan qaraxyada ayaa ka dhashay walxaha qarxa oo ay kala furfurayeen maleeshiyaadka dowladda Suuriya sida lagasoo xigtay iclaamka dowladda.
Dhinaca kale ugu yaraan 3 ruux oo Nuseyriyiin ah ayaa dhintay laba kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ay diyaaradaha Yahuudda duqeyn ka geysteen magaalo dhacda galbeedka wadankaasi.
ilo wareedyo ku dhow Nidaamka Bishaar Al Asad ayaa sheegay in duqeyn ba'an loo geystay dekadda caalamiga magaalada Laadiqiyah, holac ayaa qabsaday dekadda waxaana gubtay dhowr Konteennar.
Kooxda dab damiska ayaa ku dhowaad muddo hal saac ah ku mashquulsaneed daminta dabka ka dhax kacay dekadda magaalada Laadiqiyah, ciidanka cirka Yahuudda ayaa dhowr jeer sidaan oo kale duqeymo uga fuliyay galbeedka Suuriya waxayna beegsadeen maraakiib shixnado ka keenay dhanka dalka Iiraan.